कसले पाउला जसपाको आधिकारिता? आज बस्दै निर्वाचन आयोगको इजलास | Nepali Line
Home खेलकुद प्रमुख समाचार कसले पाउला जसपाको आधिकारिता? आज बस्दै निर्वाचन आयोगको इजलास
कसले पाउला जसपाको आधिकारिता? आज बस्दै निर्वाचन आयोगको इजलास
३ श्रावण २०७८, आईतवार १०:५०
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आन्तरिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह पार्टी र संसदीय दल दुवैतिर बहुमतमा पुगेको छ । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष भने अल्पमतमा परेको छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्री राजकिशोर यादवले समेत यादव पक्षमा जाने संकेत गरेका छन् ।
यादव पक्षले बहुमतबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिएपछि पार्टी संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकारमा जाने तयारी यादवको छ ।
पछाडि पोस्टआजै विश्‍वासको मत लिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले
अगाडि पोस्टओली सरकार को करतूत यस्तो छ
Nepali Line - ३ श्रावण २०७८, आईतवार १०:५० 0